कांग्रेस महाधिवेशन सल्यानमा महिला उम्मेदवारकाे विवाद कसरी ? नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेकाे हाे ? « Janasahara
मंसिर १९ सुर्खेत – नेपाली कांग्रेस प्रदेश महाधिवेशन अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा विवाद देखिएकाे छ । देउवा र पौडेल पक्षका महिला उम्मेदवारीमा हस्तक्षेप भएकाे आराेप छ ।
आफ्नो उम्मेदवारीमा जालझेल भएको भन्दै सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रदेश कार्य समितिमा देउवा निकट महिला सदस्यीयकि उम्मेदवार उषा रानाले आपत्ति प्रकट गरेकी छन् । उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्न आफै जान्छु भन्दा जान नदिएर चलखेल गरि आफ्नै समुहले हराएको बताएकी छन ।
केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि दिपेन्द्र कुमार खत्रीले आफुलाई उम्मेदवारी दर्ता बुझाउन तपाई जानु पर्दैन हामी बुझाउँछौ भनेर चलखेल गरि आफुलाई धाेका दिएकाे बताएकि छन ।
उषालाई आफ्नाे टिमले कसरी हरायाे ?
जनसहारा अनलाइनसँग कुरा गर्दै उषा भन्छिन; “मलाई झुक्याईयाे, टिममा नाम छ तर सुर्खेतको कोटामा परेको छ भनियाे, अनि पछि भोटिङ हुदा नमुना मतपत्रमा मेरो नाममा टिक लगाको सङ्केत छैन । मलाई टिमबाट हटाइएको रहेछ त्यसपछि म स्वतन्त्र उम्मेदवार भए । हाम्रोमा महिला नभएर शुसिला खड्कालाई ल्याएर महिला खस आर्य कोटामा र मैले जिल्ला कोटामा फारम भरियाे । पछि शुसिलालाई जिल्ला कोटामा राखेर मलाई हटाई सितालाई खसआर्यमा राखिएछ । पौडेल समुहलाई भर्ति गरियाे भने याे कस्तो खेल हाे ?”
उषाले आफ्नाे समुहले नै घात गरेका बताउँछिन । यसमा जिल्ला देखि केन्द्र सम्मका नेता तथा सांसदहरुकाे मिलेमतो रहेको दाबी गरेकि छन । उनी भन्छिन्; “यदि मेरो फारम बिग्रेको भए म मान्छु अनि फारम भर्न बिग्रेको भए मलाई जानकारी किन आएन ? तर जुन महिला शुसिलाको खसआर्यलाई कसरी जिल्ला कोटामा राखियो ।”
यसबारेमा आफुलाई करिब राति १० बजेपछि मात्रै सह-महामन्त्री एकराज डागीले भनेपछि थाहा भएकाे बताइन । त्यसपछि फाराम बुझाउँने दिपेन्द्रलाई साेधपुछ गर्दा भोलि हुन्छ भनेपछि भोलिपल्ट बिहान निर्वाचन अधिकृतसँग जाँदा तपाईकै टिमकाले सच्याएको हो सच्याउँन मिल्दैन भनेपछि सबै रहस्य खुलेकाे उषा बताउँछिन ।
तपाईंको राजनितीक पृष्ठभूमि केही छ ? भन्ने प्रश्नमा उषा भन्छिन; मेरो बुवा २०५४ सालको स्थानीय चुनाव तत्कालीन मर्मा गाबिस सल्यानको अध्यक्ष हुनुभयाे । बुवालाई २०५५ असाेज १० गते माओवादीले हत्या गरे । त्यसपछि बुवाकाे सपना पूरा गर्न राजनितीमा लागेकाे उषाले बताइन । त्यसयता प्रोजेक्टमा जागिर गर्थे यहि राजनीति गर्ने भएकोले माओवादीको हाकिमले डाह गरेर हटायो बरु जागिर छोडे राजनीति छोड्न सकिन । पार्टीको वडा कोषाध्यक्ष हुदै गाबिस अनि नगरको कोषाध्यक्ष र अघिल्लो अधिवेशनबाट जिल्ला सदस्य भइसकेकी छु । अहिले आएर प्रदेशमा जित्ने सम्भाबना देखेर मेरो डाह गरेर यो अगाडी बढ्छे भनेर मलाई यो षड्यन्त्र गरिएकाे बताउँछिन । सिता दिदिलाई म दाेष दिन्न कांग्रेस जिल्ला देखि केन्द्र सम्मकाे नेतृत्वको खेलकाे मैले राम्रोसँग बुझेकाे छु ।
विजयी सीता के भन्छिन ?
जनसहरा अनलाइनसँग कुरा गर्दै सिताले भनिन्; पहिला हामी आ-आफ्नाे प्यानलबाट चुनाव लडने पक्कापक्की थियाे । हाम्रो प्यानलकाे सबै टिम पुग्याे तर उता उषा तिर महिला नपुगेपछि उहीँ समुहबाट नै मलाई दुवै पक्षमा राखियाे र मैले बढि मत पाउनुकाे कारण पनि त्यहि हाे । उनले राजनिती गर्ने नै भए अनेक कुराकाे सामना गर्नुपर्ने पनि बताइन ।
उषालाई उनकाे समुहबाट धाेका कसरी भयाे त्याे म जान्दिन । उनकाे उम्मेदवारी गलत ठाउँमा थियाे वा अरु कुनै समस्या हाे । नेतृत्वले पनि हामीलाई मिलाएर लिन खाेजेकाे खबर गरिदिनुपर्ने हाे । मैले बुझेकाे उनकाे समुहमा महिला नपुगेपछि दुवै समुहको प्रतिनिधित्व हुने गरि मलाई बनाइएको हाे ।
उनको स्थानमा दुबै टिमबाट विजेता सीता मल्लले सर्वाधिक ६ सय १५ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । जिल्लामा पौडेल समुहमा र प्रदेशमा दुबै देउवा र रामचन्द्र समुहले मल्लको नाम राखेपछी उनले निर्वाचन जितेकी हुन । मल्लको नाम आफ्नो समुहमा राखिएको भन्दै सल्यानका संस्थापन समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन।
शारदा नगरपालिका सल्यानकी कर्मचारी समेत रहेकी नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् ।नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खरिदार सरहको करार कर्मचारीमा कार्यरत सीता मल्ल गिरी कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट खशआर्य महिलामा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । मल्लले यसअघि जिल्लामा भएको निर्वाचनमा आफु कार्यरत शारदा नगरपालिकाकी उप-प्रमुख सावित्रा बस्नेतलाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हराएकी थिइन् ।